Kiwix: pinda Wikipedia pasina Indaneti | Linux Vakapindwa muropa
Kunyangwe Internet ichiwedzera kuwanda, kuchine dzimwe nyika dzine urombo nenzvimbo dzekumaruwa uko kuwana network hakusi nyore. Neichi chikonzero, vanhu vazhinji havana mukana wekuwana ruzivo kubva kumasayiti seWikipedia. Uye, mukushayikwa kwemapurojekiti emuno senge Encarta uye nezvimwe, Kiwix chirongwa chemahara che software chinogona kubatsira mune idzi kesi.
Kiwix chaizvo zvinokupa mukana wekuwana Wikipedia isina internet yekubatanidza. Iwe unogona zvakare kuita zvakafanana nemamwe akafanana MediaWiki-based web portals. Naizvozvo, iwe unogona kuve uine yakawanda yepamhepo wikis pamunwe wako. Kune rimwe divi, zvakare inosanganisira mamwe mabasa anonakidza, pamwe nekuwanikwa kweWindows, macOS, GNU / Linux, iOS uye Android.
Kiwix yakagadzirwa naEmmanuel Engelhart naRenaud Gaudin, mushure mekusaedza kuedza kuburitsa iyo Wikipedia pane CD-ROM. Pakutanga, chirongwa ichi chaichengetedzwa neLinterweb, izvo zvaizomira kubatana mukushambadzira, nekuti zvaisabvumirana nazvo kuva open source.
NaKiwix unogona kuwana ruzivo rwese paWikipedia uye nemamwe mawirikisheni asingabvumirwe. Zvese zvakachengetwa mufaira ZIM fomati. Uye zvakare, iwe zvakare une zvinyorwa zveZIM mafaera akagadzirira kushandiswa uye mumitauro yakati wandei.
Kune rimwe divi, Kiwix inosanganisira injini yekutsvaga, yekufambisa system, uye sarudzo yekutumira zvinyorwa ku PDF format. Inosanganisirawo mabhukumaki uye manotsi system, HTTP server, iri nyore uye mitauro yakawanda mushandisi interface, yekufambisa tabo, uye zvemukati uye download maneja
Pane nharembozha, nekuda kweiyo yakasanganiswa TTS system, unogona zvakare kuteerera kune izvo zvirimo ne izwi synthesizer Inoverenga chinyorwa chako, iri zvakare nhau huru kune avo vanoda mikana yekuwanika.
download Kiwix - Yepamutemo webhusaiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kiwix: svika Wikipedia isina internet yekubatanidza